जीवनशैली – Pahilo Page
ईकलेज २०१६ को ताज पेमा गुरुङको शिरमा
काठमाडौं । सिजन मिडियाले राजधानीमा आयोजना गरेको ‘मिस इकलेज २०१६’ मा पेमा गुरुङले शीर्ष ताज जितेकी छन् । उनले विधागततर्फको ‘मिस पर्सनालिटी’ र ‘मिस बेष्ट वल्क’ को ट्रफी पनि आफ्नो पोल्टामा पारिन् भने उपहार स्वरुप स्कुटर पनि जितिन् । प्रतियोगितामा अनिषा मिश्र फष्ट रनरअप हुँदा यूनिता खत्री सेकेण्ड रनरअप, अनु
काठमाडौं । प्रथम मिस नेपाल युएस २०११ की विजेता सुजिता बस्नेत हालै अमेरिकामा सम्पन्न मिस वल्र्ड अमेरिका २०१६ को सेमिफाइलन चरणसम्म पुग्न सफल भएकी छिन् । नेपाली युवतीको यो पहिलो सहभागिता हो । मिस वल्र्ड २०१६ मा अमेरिकी प्रतिनिधि चयन गर्न गरिएको राष्ट्रियस्तरको प्रतियोगिता मिस वल्र्ड अमेरिका २०१६ मा २८
चैत २६ आउनुअघि रङ्गको पर्व होलीमा “रामप्यारी” धमाका
काठमाडौं । चैत २६ गतेदेखि प्रदर्शनको तयारीमा रहेको चलचित्र “रामप्यारी”को प्रमोशनमा नायिका रेखा थापाले रङ्गको पर्व होलीलाई समेत भरपुर उपयोग गरिन् । विभिन्न ठाउँमा “रामप्यारी”को टिमसहित पुगेर रङ्गमा रमाइन् । त्यसबाहेक अन्य कलाकारहरुले पनि होली पर्व मनाएका छन् । पहाडी भेगमा होली पर्व मनाइँदा सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरु पनि रङ्गीन देखिएका
आर्यन र मरिष्काको प्रेम फस्टलुकमा, ‘के म तिम्रो होइन र’को अडियो कर्णप्रिय
अहिले सम्मकै सर्वाधिक व्यापार गर्न सफल चलचित्र ‘कोहिनुर’का निर्देशक हुन्, आकाश अधिकारी । उनै आकाशले निर्देशन गरेको नयाँ चलचित्र ‘के म तिम्रो होइन र’को फस्टलुक रिलिज गरिएको छ । नारी दिवसको अवसर पारेर बैशाख ३१ गतेबाट प्रदर्शनमा आउने यो चलचित्रको फस्टलुक रिलिज गरिएको हो । अधिकारी ब्रदर्स पिक्चर्सको प्रस्तुतीमा
म रियलमा पनि बोल्ड छु, शिवम् जीले चोर्न जान्नु भएनः बर्षा राउत
चलचित्र ‘काफल पाक्यो’कि नायिका बर्षा राउत अहिले उत्साहित छिन् । उनले अभिनय गरेको चलचित्र ‘काफल पाक्यो’ माघ १ गतेबाट हलमा लाग्दैछ । सोही चलचित्रको प्रचारमा व्यस्त बर्षाले निरन्तर चलचित्रमा काम गर्ने बताइन् । अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै उनले चलचित्र र आफ्नो करिअरको बिषयमा केही कुरा खोलिन् । १. काफल पाक्यो कस्तो
‘प्रेमगीत’का प्रदिप भन्छन्-‘भूकम्पले मेरो करिअर परिवर्तन गरिदियो, नत्र विदेशमा हुन्थेँ'(कुराकानी)
चलचित्र क्षेत्रमा केही गर्छु भनेर ४ बर्षदेखि संघर्ष गरिरहेका कलाकार प्रदिप खड्का अहिले भने खुशी छन् । ४ बर्षदेखि आफूले देखेको सपना चलचित्र ‘प्रेमगीत’बाट पुरा हुन लागेकोमा उनी खुशी देखिए । चलचित्रको गीतसंगीत सार्वजनिक भएपछि प्रदिपको पनि चर्चा छ । उनै प्रदिपले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै चलचित्र र आफ्नो करिअरको बिषयमा
ड्याडी-ममी नमिले ‘मर्छु’ समेत भनेँ: अनमोल केसी
भुवन केसी मेरो बच्चाजस्तो पो लाग्छ
नायक अनमोल केसी (छोरा) र भुवन केसी (बाबु)को सम्बन्ध बाहिर हेर्दा जस्तो छ, के भित्री रूपमा पनि त्यस्तै होला ? आमा सुस्मिता घर छाडेर गएपछि अनमोलको मनोविज्ञानमा कस्तो असर गर्यो होला, के अनमोल आमाबाबुलाई एक हुनुपर्छ भन्नका लागि अगाडि आएनन् होला त ? यस्तै-यस्तै प्रश्न धेरै पाठकको मनमा पनि हुन
४ बडिगार्ड र प्रहरीको सुरक्षामा हल पुगे अनमोल, यूवा स्टारको कस्तो क्रेज
बलिउडका स्टार कलाकारमा देखिने स्टारडम अहिले नेपाली चलचित्रका चकलेटी नायक अनमोल केसीमा पनि देखिएको छ । शनिबार काठमाण्डौको गोपिकृष्ण हलमा पुग्दा अनमोलको क्रेज कुनै हलिउड र बलिउड कलाकारको भन्दा कम थिएन । अझ अनमोल दर्शक हलमा प्रवेश गरिसकेपछि पुगेकाले पनि वास्तविक भीड उनले पनि देख्न पाएनन् । तर, अनमोल जसरी
बिबी अनुरागीको एकल साँझ हुने
काठमाडौं । नेपाली कला संगमले बिबी अनुरागीको एकल साँझ गर्ने भएको छ । नेपाली कला संगमले निर्भाना कला केन्द्रको सहकार्यमा भूकम्पबाट क्षतीग्रस्त धादिङको चण्डीदेवी माध्यमिक विद्यालय र सिन्धुपालचोकको जनता माध्यमिक विद्यालयको पूर्ननिर्माणमा सघाउन कार्यक्रम गर्न लागेको जनाएको छ । टेको सन्ध्या नाम दिइएको सांगितीक कार्यक्रममा अनुरागीको संगीतमा विभिन्न गायक गायिकाले
खुश्वुलाई लक कहिले लाग्ला ? ६ फिल्म तर छैन रिलिज
चलचित्र ‘साइना’मा पहिलो पटक काम गर्दा नायिका खुश्वु खड्कालाई यो क्षेत्रमा केही गर्ने जोश थियो । चलचित्र क्षेत्रमै लागेर चर्चित नायिका बन्ने सोचले अगाडि बढेकी उनी ७ बर्षदेखि यही क्षेत्रमा छिन् । तर, पहिलो चलचित्र चलेपनि अपेक्षित सफलता पाएन । खुश्वुले दोश्रो चलचित्रमा अभियन गरिन्, ‘सुकुलगुण्डा’ । यो चलचित्रमा नायक
सुटिङ नसकिदै ऋतिकको चलचित्रलाई ४५ करोड
बलिउडमा अहिले स्टार र राम्रो बिषय भएका चलचित्रलाई राम्रो कमाई गर्न खासै समस्या छैन । कुनै बेला निर्माताहरु चलचित्रको बक्स अफिसबाट आउने कमाइमै चित्त वुझाइरहेका हुन्थ्य । तर, अहिलेका निर्मातालाई चलचित्रको चर्चा राम्रो भएको खण्डमा पैसा कमाउने अनेक बाटा छन् । नायक ऋतिक रोशन अहिले चलचित्र ‘काबिल’को छायांकनमा व्यस्त छन्